Tetezan’i Kamoro : akora manokana ny vy ampiasaina | NewsMada
Tetezan’i Kamoro : akora manokana ny vy ampiasaina
Voalohany ! Sambany ampiasaina eto Madagasikara ny akora vy manokana, hanamboarana ny tetezana mihantona vaovao any Kamoro, Maevatanana, amin’ny lalam-pirenena fahefatra (RN 4, PK 406). Antsoina hoe « corten » ity vy ity, ary mateza sady tsy mila lokoina intsony. Mahatanty ny karazana toetr’andro rehetra ihany koa, toy ny orana sy ny hafanana, ary tsy mety lo.
Nambaran’ny talen’ny orinasa Eiffage, manamboatra ity tetezana ity, fa mihena 15 hatrany amin’ny 20% ny masonkarena amin’ny fampiasana azy. Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy eoropeanina, efa fampiasa amin’ny fotodrafitrasa lehibe any ivelany.
Mikasika ilay tetezana, mampiavaka azy ny ahafahan’ny fiara roa mandeha eo aminy, raha iray ihany ny an’ilay teo aloha. “Mahazaka hatrany amin’ny 120 t ity tetezana vaovao vao haorina ity”, hoy ny talen’ny Eiffage Madagasikara, Benoît Turmine.
Nofanina sy nahazo traikefa
Nahazo tombony ireo mpiasa malagasy miasa any an-toerana satria noraisina ho mpiasa raikitra CDI sy nahazo sokajy OS1 raha mpiasa an-tselika ny nidirany tao amin’ny Eiffage, satria nahazo traikefa. Nisy koa nahazo fiofanana amin’ny fandrefesan-tany, ny lafiny fiarovana sy ny fahadiovana ary ny tontolo iainana (QSSHE). Ary anisan’ny traikefa azon’izy ireo koa ny fomba hikojakojana ny tetezana mihantona.
Nanomboka ny tapaky ny taona 2015 ny asa ary ho vita amin’ny lohataona 2017. Efa vita tanteraka, ankehitriny, ny andry natao tamin’ny vatokely sy simenitra ary vy (béton) hametrahana ireo vy “corten” ireo.